Taura neni neTokBox | Martech Zone
Monday, May 17, 2010 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Lorraine Bhora
Ini ndiri wekushambadzira geek, saka ndinofara kana tekinoroji nyowani ikauya iyo inogona kubatsira vatengi vangu. Ini ndinopedza maawa ndichinyoresa, uye kuyedza masevhisi matsva. ndofunga TokBox chingave chishandiso changu chitsva chandinofarira.
Ndakaunzwa kusevhisheni negweta rangu. (Hongu ndine gweta, uye zvirinani zvakadaro, iye tech tech gweta). Ndakamutumira kondirakiti kuti aongorore, uye pachinzvimbo chekundidzosera gwaro rakareba rine mapeji 2 - 3, iro randisingazoverenge chero nzira, akanditumira vhidhiyo iyi. Mukutaura naMat, akabvuma kuti aisazoshandisa chishandiso nevatengi vese. Vamwe vatengi vanozofarira, kana kuda gwaro rakanyorwa, asi kune avo vasiri iyi inokurumidza, inoshanda nzira yekutaurirana.
Kubva pakuona kwekutumira sevhisi, kurekodha vhidhiyo kwaikurumidza, wobva wanyora kana kumirira munyori kuti anyore mhinduro saka ini ndakawana mhinduro yangu nenzira yandaida, uye Matt aigona kuenda kumutengi wake anotevera.
TokBox ine akati wandei maficha ayo andaida chaizvo:
Iko mahara - Ehe pane kukwidziridzwa uye epamberi maficha anowanikwa pamubhadharo, asi base base package yakanyatso kukwana
Ini ndinogona kupindura nevhidhiyo, izwi, email kana kufona zvese kubva kune imwecheteyo skrini
Izwi uye vhidhiyo yekutaura maficha anowanikwa pamutengo unonzwisisika: $ 9.99 / mwedzi kune madiki machats. $ 18.99 yehurukuro inosanganisira vanhu vanopfuura mazana maviri. Iyi ndiyo nzira inodhura inoshanda kune mawebhusaiti
Sei ndichifarira izvi?
Ndiri mutauri, kwete munyori, saka izvi zvinondinakidza senzira yekutaurirana kune vanotarisira nevatengi.
Ndiri kutarisira kusanganisira vhidhiyo sechikamu chematanho edu aripo, uko kwatinozochinja, vhidhiyo, odhiyo uye email yechinyakare
Iyo yekushandisa interface iri nyore kwazvo kune vese mushambadzi uye vatengi vavo. Ini ndakagamuchira email yakapusa, ndikadzvanya pane iyi link uye chirongwa chakatangwa. Izvo zvaida HAPANA hunyanzvi uye kune vanoverengeka vatengi vangu, hapana hunyanzvi inokosha.
Chii chaungaite neTokBox? Ini ndinofunga mhinduro inoenderana nekufunga kwako. Kana iwe ukaishandisa ini ndingafarire kuona masampuli ezvaunoita!
Tags: linktigertsvaga maringe nemagarirokunyora
Maitiro ekusarudza SMS / Meseji Mutengesi mutengesi